एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी : कम्पनी विश्लेषण (सोमवार, २९ असोज २०७५) | गृहपृष्ठ
Home लगानी एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी : कम्पनी विश्लेषण (सोमवार, २९ असोज २०७५)
on: October 15, 2018 लगानी
एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी : कम्पनी विश्लेषण (सोमवार, २९ असोज २०७५)
बीमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि नियामक निकाय बीमा समितिबाट विक्रम २०६४ फागुन १५ गते अनुमति पाएको एशियन लाइफले सोही वर्षको चैत २१ देखि विधिवत रूपमा कारोबार सञ्चालन गरेको हो । यस कम्पनी बीमा समितिबाट जीवन बीमा व्यवसायका लागि स्वीकृति पाउने पहिलो कम्पनी रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को वार्षिक साधारणसभा गत जेठ १९ गते सम्पन्न गरी लगानीकर्ताका लागि त्यस वर्षको मुनाफाबाट ४ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरिसकेको छ । सोही सभाले ६० प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने निर्णयलाई पनि अन्तिम रूप दिएको थियो । यसअघि गतवर्ष ५० प्रतिशत हकप्रद जारी गरेको यस कम्पनीले पूँजी वृद्धिका लागि पुनः हकप्रदको सहारा लिएको हो । यस कम्पनीले नियामकको निर्देशनअनुसार रू. २ अर्ब चुक्तापूँजी पु¥याउनुपर्नेछ । केयर रेटिङ्स नेपालले यस कम्पनीले जारी गर्न लागेको हकप्रद शेयरलाई ग्रेड ३ प्रदान गरेको छ । यस रेटिङले कम्पनीको आधारभूत पक्ष कमजोर रहेको बुझाउँछ । हाल रू. १ अर्ब २५ करोड ६७ लाख २५ हजार चुक्तापूँजी रहेको कम्पनीको हकप्रदपछि रू. २ अर्ब १ करोड ७ लाख ६० हजार पुग्नेछ । कम्पनीले जीवन बीमा व्यवसाय वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा बीमालेख जारी गर्ने मात्र नभई बीमितहरूको सेवा र सुरक्षित भविष्यका लागि दाबी भुक्तानीलाई समेत प्राथमिकता दिने नीतिका साथ अघि बढेको छ । हाल कम्पनीले २८ शाखा कार्यालयमार्फत देशको ७७ ओटै जिल्लामा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । भविष्यमा देशका सम्पूर्ण जिल्लामा थप शाखा विस्तार गर्ने योजनाका साथ सङ्घीयताको ढाँचामा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गरी बीमा सेवालाई सहज, सरल र प्रभावकारी बनाउने कम्पनीको योजना छ ।
कम्पनीले सार्वजनिक गरेको आव २०७४/७५ र २०७३/७४ को त्रैमासिक वित्तीय विवरणबीच तुलना गर्दा :
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कम्पनीको नाफा साढे ९ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा रू. ४ करोड २१ १६ हजार नाफा आर्जन गरेको कम्पनीले गतवर्ष भने रू. ४ करोड ६० लाख ५४ हजार नाफा गरेको हो ।
कम्पनीको जगेडा कोष भने रू. २४ करोड ९९ लाख २५ हजार छ । जगेडा कोष रकममा अघिल्लो वर्षको भन्दा करीब ३२ प्रतिशत वृद्धि देखिएको हो ।
कम्पनीको बीमा कोषमा रू. १३ अर्ब १३ करोड ३ लाख ४१ हजार छ । बीमा कोष रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३० प्रतिशत वृद्धि भएको हो ।
दीर्घकालीन लगानीमा गत चौथो त्रैमासमा रू. १२ अर्ब २९ करोड ९६ लाख ६० हजार रहेको उल्लेख छ । यस शीर्षकमा अघिल्लो वर्षको भन्दा ३९ प्रतिशत रकम बढेको हो ।
कम्पनीमा हाल कायम बीमालेखको सङ्ख्या २ लाख १२ हजार ५ सय ४७ छ । गत चौथो त्रैमासमा अघिल्लो आवको भन्दा साढे ३१ प्रतिशत बढी रू. ३ अर्ब १ करोड ८६ लाख ५८ हजार बीमाशुल्क आर्जन गर्न कम्पनी सफल भएको छ ।
गत आवको चौथो त्रैमासमा ३ हजार १ सय ९७ जनालाई रू. ९३ करोड ३१ लाख ८३ हजार दाबी भुक्तानी गरेको यस कम्पनीले ७६ जनालाई रू. १ करोड ६३ लाख २१ हजार दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
कम्पनीको गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार प्रतिशेयर आम्दानी रू. ३ दशमलव ६६, प्रतिशेयर कुल सम्पत्ति मूल्य रू. १ हजार १ सय ९९ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १ सय १९ दशमलव ८९ छ । आइतवारको कारोबारमा कम्पनीको प्रतिशेयर अन्तिम मूल्य रू. ५ सय ९३ कायम भएको छ ।
डिभिडेण्ड इल्ड रेसियो : प्रतिशेयर लाभांश (गत वर्ष)/प्रति शेयर बजार मूल्य×१००
अर्निङ इल्ड रेशियो : प्रतिशेयर आम्दानी/प्रतिशेयर बजार मूल्य× १००
खरीद चाप : कम्पनीको आइतवार भएको शेयर कारोबारमा अन्तिम समयसम्म विक्री चापको तुलनामा खरीद चाप बढी रहेको छ । सो अवधिसम्म ५ सय ९ सय कित्ता शेयर खरीद र १ हजार १ सय ६० कित्ता शेयर विक्री विक्री गर्ने माग थियो ।
कम्पनीको ६२ दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा ड्र्यागनफ्लाई डोजी आकृति भएको मैनबत्ती बनेको छ । यस्तो आकृतिले कम्पनीको शेयरमूल्य बुलिश ट्रेण्डमा रिभर्स हुने सङ्केत गर्दछ । यसको विश्वसनीयता सामान्य रहन्छ । आरएसआई न्युट्रल जोन ४७ दशमलव ९३ बिन्दुमा छ । यसले शेयर खरीद विक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ । कम्पनीको स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन ५ दशमलव शून्य ८ बिन्दुमा छ । उतारचढाव न्यून रहेको छ । यस्तो अवस्थामा कम जोखीम हुन्छ भने प्रतिफल पनि कम हुने गर्दछ । त्यस्तै, कम्पनीको मुभिङ एभरेजमा २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कासँग टाढिएका छन् । हालको मूल्य २९ दिने औसत मूल्यरेखा भन्दा तल र १४ दिने औसत मूल्यरेखासँग जोडिएको छ । हालको मूल्य रू. ५ सय ९३ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई महँगिएमा रू. ५ सय ९९ मा प्रतिरोध र सस्तिएमा रू. ५ सय ७८ मा टेवा पाउने देखिन्छ ।